Shaqsi ka tirsan Liverpool oo ogaaday lacagaha ay bixin doonto Manchester City haddii ay tartan walba ku guuleysato xilli ciyaareedkan – Gool FM
Shaqsi ka tirsan Liverpool oo ogaaday lacagaha ay bixin doonto Manchester City haddii ay tartan walba ku guuleysato xilli ciyaareedkan
Ahmed Nur April 7, 2021
(Manchester) 07 Abril 2021. Naadiga Manchester City ayaa u tartameysa xilli ciyaaredkan ilaa afar tartan oo kala duwan, waxaana haddii ay gacanta ku dhigaan tartammadan Man City ay weyn doontaa lacag ka bixi doonto qasnadahooda.
Kooxda uu hoggaamiyo Tababare Pep Guardiola ayaa wali qayb ka ah kooxaha wali u tartamaya Champions League, Premier League, Carabao Cup and FA Cup, waxaana xusid mudan inay hoggaamineyso horyaalka Ingiriiska, sidoo kalena ay joogto fiinaalka tartanka EFL Cup.
Sidaas darteed, Man City ayaa xilli ciyaareedkan qaadi karta afar tartan haddii ay si guulo leh ku dhammeystaan fasalkan, waxaase taas baddelkeeda ay bixin doonaan 158,245,080 gini oo ku xusan qaar ka mid heshiisyada ay xiddigaha qaar kula jiraan.
Kieran Maguire oo ah khabiir ka faallooda dhaqaalaha kubadda cagta, macallinna ka ah Jaamacadda University of Liverpool ayaa baahiyay lacagaha wadar ahaan Man City kaga baxaya gunnooyinka xiddigaha iyo heshiisyadii ay kooxahooda kaga soo qaadatay inay gaarayaan 158 milyan oo gini haddii ay qaaddo afarta tartan ee ay u dagaallameyso xilli ciyaareedkan.
Si kastaba ha ahaatee, xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay, Manchester City ayaa gunnooyinka ku xusan heshiisyada xiddigaha haddii ay bandhiggooda kaga caawiyaan kooxda inay tartan ku guuleysato ku bixiyay lacag dhan 200 milyan oo gini.
Maaliyadda Arsenal gurigeeda ku ciyaari doonto xilli ciyaareedka dambe oo si qarsoodi ah loo helay... (& Taageerayaasha ku maadeystay)
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Bayern Munich iyo Paris Saint-Germain ee Champions League oo la shaaciyey